Fashion 10 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:10 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်,10 PCs မိတ်ကပ် Brush,Fashion 10 မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > brush သတ်မှတ်မည် > 10pcs Brush သတ်မှတ်မည် > Fashion 10 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
ထွက်နိုင်ရေး: 20000 Set/Sets per Month
set 1 အမှုန့်ဖြီး, 1 မျက်နှာဖြီး, 1 ပုံဖြီး,3မျက်စိအရိပ်ဖြီး, 1 နှုတ်ခမ်းဖြီးနဲ့ 1 မျက်ခုံးဖြီးပါဝင်သည်
အရည်နှင့်အမှုန့်မိတ်ကပ်အဘို့အသင့်လျော်အဆင်းလှသောအစ်မ, ရောင်စုံ, ကြံ့ဦးချိုပုံစုတ်တံ; လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အနတ္တသို့မဟုတ်တျပေါ်ဖော်ပြရန်ကြီးမြတ်
soft နှင့်သိပ်သည်းဖောင်ဒေးရှင်း, မျက်နှာ, ဆိုးဆေးများနှင့်မျက်စိအရိပ်၏ရုံပိုင်ခွင့်ပမာဏကိုတက်လှည်းနှင့်အိပ်မက်နဲ့တူရောနှောနေခြင်းလိမ့်မည်ဟုစုတ်တံ bristled
ဖြစ်နိုင်ခြေကဆက်ပြောသည်အတိမ်အနက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောကောက်ကြောင်းဖန်တီးအကြိုက်ဆုံး features တွေကိုပေါ်လွင်, မတူညီမျက်နှာစုတ်တံ၏ဤအစုနှင့်အတူအဆုံးမဲ့များမှာ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးသင့်ရဲ့သဘာဝကအရိုးတည်ဆောက်ပုံကိုတိုးမြှင့်
ပုံစံ: Powder မျက်နှာမပျက်, ပုံ Brush, မျက်နှာမပျက် Brush, နှုတ်ခမ်း Brush, မျက်ခုံး Brush, Eyeshadow Brush
item: မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
အရေအတွက်: 10Pcs / set ကို
brush ပစ္စည်း: Synthetic ဆံပင်
Ferrule ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်
logo: ပုဂ္ဂလိက logo Accept
OEM & လိမ္မော်ရောင်: လက်ခံ
shipping နည်းလမ်းများ: Epacket, DHL, Fedex, EMS, UPS,
3.We စက္ကူစက္ဏူထူများနှင့်အရွယ်အစားများအတွက်စံအရွယ်အစားဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ် customeized နိုင်ပါတယ်ပါပြီ
သင့်ရဲ့မိတ်ကပ် Brush ရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
1. နွေးပြေးရေအောက်ရှိဖြီး၏ဒြပ် bristles run လိုက်ပါ။ (ဒါဟာအလှကုန်ပစ္စည်း brush ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါအဖြစ်ဟော့ရေမသုံးတဲ့)
2. တစ်ဦးအလင်း lather ထဲသို့ဒြပ် bristles နှင့်အလုပ်မှသေးငယ်တဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မျက်နှာ cleanser ကိုပမာဏသို့မဟုတ်ဖြီးသန့်စင် Apply ။
3. ရေ running အောက်မှာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါ bristles ဆေး။ သင့်အနေဖြင့်ဖြီးထွက်ခွာသည့်ရေဟောင်းကိုမိတ်ကပ်ထံမှ tinted ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမအရောင်ဟာဖြီးအပေါ်ဖြစ်နေဆဲသည်အထိ 4. လက်မဆေး Continue ။
5. ဖြီး Air-ခြောက်သွေ့တဲ့ခွင့်ပြုရန်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : brush သတ်မှတ်မည် > 10pcs Brush သတ်မှတ်မည်
10 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် 10 PCs မိတ်ကပ် Brush Fashion 10 မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်5PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် 24 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် Fashion မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် Kabuki မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်